Articles tagged 'mudenda'
Mamombe's arrest above board, says Mudenda 4 March 2019 The arrest of MDC MP for Harare West Joana Mamombe during a parliamentary workshop in Nyanga at the weekend was above board as she was taken by police well after the august House's business, National Assembly Speaker Jacob Mudenda has said.
Mnangagwa rises as Mugabe falls 22 November 2017 HARARE – The curtain finally came down on President Robert Mugabe's 37-year rule, as he resigned with immediate effect yesterday, triggering massive celebrations across the country. Mugabe had been under siege since the country's military intervened last week to restore order and rescue the ec...
Tyson survives another day 22 June 2017 HARARE - Zanu PF national political commissar Saviour Kasukuwere will have to wait a little longer before he knows his political fate after the politburo yesterday referred to President Robert Mugabe and his deputies his case for determination. Kasukuwere has been under fire ever since nine ou...
Huge Parly burdens fiscus: Mudenda 22 June 2017 HARARE – National Assembly Speaker Jacob Mudenda has slammed an “elephant size” team of 350 legislators that he said was a burden to the fiscus. It is the largest legislature since the southern African country attained independence from British colonial rule in 1980. Legislators receive mon...
'2016 Budget clashes with ZimAsset' 9 December 2015 HARARE - Zimbabwe's 2,7 percent economic growth projection for next year is out of sync with the country's five-year economic blueprint goals, Speaker of Parliament Jacob Mudenda has said. Mudenda told delegates attending a Post-Budget Seminar in the capital yesterday that there was need to f...
UN urges tax reforms 17 November 2015 HARARE - Zimbabwe must introduce tax reforms as a way of promoting investment, enhancing inclusive growth and poverty reduction, the United Nations has said. The United Nations resident coordinator, Bishow Parajuli, last week said one of the concerns the international organisation has on Zimba...
Parly speaker snubs MDC MP recall bid 15 November 2014 HARARE – Jacob Mudenda, the National Assembly Speaker, yesterday dismissed a request by Morgan Tsvangirai’s MDC to recall 18 lawmakers from Parliament. Douglas Mwonzora, the MDC secretary general, last week wrote to Mudenda informing him of the MDC congress resolution to recall the MPs that c...